China Jinsu kettle mgbịrịgba ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Meiao
Ngwa akụrụngwa egwuregwu akụrụngwa setịpụrụ igwe mgbatị ahụ ...
Kwụ Ọtọ ma ọ bụ Curl ofu Barbell Weight Plate For Str ...
A na -eji mgbịrịgba kettle vinyl na -eme ihe n'oge a. Ọtụtụ ndị mmadụ na -enwe mmasị iji mgbịrịgba kettle. Bell mgbịrịgba anyị bụ mgbịrịgba kettle vinyl. Uru ya bụ na enwere ike ịme ya n'ụdị agba dị iche iche. Agba anyị na -ebikarị n'ime ya bụ: ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, pink, odo odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị ahịa nwere ike hazie ụcha kachasị amasị ha dị ka mkpa ha si dị, na ọbụna hazie LOGO kacha amasị ha.
Ihe gbasara ya, ime ya bụ igwe zuru oke, ọ naghị ejikọ ọnụ, n'ozuzu ya, a na-edozikwa Vinyl na mpụga, na-adọrọ adọrọ, mara mma nke ukwuu, na iji ihe nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ nweghị mmerụ ahụ n'ahụ mmadụ, yana adịghị amasị roba nwere isi na -adịghị mma, ọ nweghị isi. Ka anyị wee mee ka ọ maa mma karịa, anyị sere aka ahụ. Nke a abụghị naanị na -eme ka aka ahụ mara mma karịa, kamakwa na -enwe ahụ iru ala, ọ bụghị ịcha, ọ bụghị akwa, aka ahụ dị ezigbo ụtọ, kamakwa na -egbu maramara. Aka nke mgbịrịgba kettle adịghị akwụ ọtọ, mana ọ na -agbatị, na -eme ka ọ dị mma ijide.
Banyere nkọwapụta, anyị nwere 4-6-8-10-12-14-16-18-20-32KG.
Banyere nkwakọ ngwaahịa: anyị na -etinye mgbịrịgba kettle n'ime katọn. Nke mbụ, anyị ga -etinye mgbịrịgba kettle n'ime akpa OPP dị ka mkpuchi nchekwa mbụ maka mgbịrịgba kettle, wee tinye ya n'ime katọn, n'ikpeazụ tinye ya na pallet. Pallet bụ usoro nkwakọ ngwaahịa a na -ejikarị na mbupu, ọ bụkwa ya bụ nchekwa kacha mma maka ngwaahịa a, yabụ na ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị maka ngwaahịa a ga -emebi. Anyị ga -agbakọtakwa ọtụtụ ihe mkpuchi ihe nkiri na mpụga pallet.
Nabata ịzụta mgbịrịgba kettle anyị, anyị na-atụ anya mgbịrịgba kettle emebere nke gị, mgbịrịgba kettle pụrụ iche.
Nke gara aga: Barbell mmanya
Osote: Vinyl/Neoprene Dumbbells
N'ogbe ngwaahịa mara mma inogide omenala s ...
N'ogbe 12kg Omenala logo yi Bodybuildi ...
China Factory ọkọnọ mgbatị Equipment 20kg ntụ ntụ ...
Factory N'ogbe omenala logo Shiny yi vi ...
Agba dị iche iche dị ọnụ ala ọnụ ahịa mgbatị ahụ vinyl kettlebell
54LB ụmụ nwoke mma mgbatị ngwá igba ígwè ...
Ikekwe maka ibi ndụ dị mma, ma ọ bụ iji mee ka ahịrị ahụ sie ike, ọtụtụ mmadụ hụrụ ahụike n'anya, n'ihi nke a, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bidoro APP omenala ọ bụla, akwụkwọ nkuzi anaghị ada, .. .